निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, खारेज हुने सम्भावना कति ? - Nepal Face
निष्क्रिय बन्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक, खारेज हुने सम्भावना कति ?
बजेट संशोधन :स्रोत नै नभएका चौध सय आयोजना खारेज, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढ्यो
स्पन्ज आइरनमा राजस्व छुट : नीतिगत अनियमितताको आशंका
काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ । मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्। २५ गते पेस भएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय बन्ने भएको छ। अब सरकारले बजेटसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
एक विज्ञले भने, ‘एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेर बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुर्‍याएको सन्देश पनि यसबाट गएको छ।’ मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा पनि एमालेका सांसदले नाराबाजी जारी राखे। नाराबाजीकै बीच सदनमा विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। यो विधेयकमाथि संशोधनको समय सुरु भइसकेको छ। तर ३० गतेभित्र दुवै सदनले पारित नगर्ने हो भने यसको निरन्तरता समाप्त हुनेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
# बजेट संशोधन # बजेट प्रतिस्थापन विधेयक